Lacagihii Ceymiska ee lagu soo rogay Gaadiidka Muqdisho oo la joojiyay +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Lacagihii Ceymiska ee lagu soo rogay Gaadiidka Muqdisho oo la joojiyay +Cod
Maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaciyay in la joojiyay lacagaha Ceymiska ee qaabka qasabka ah loogu soo rogay gaadiidka BL-ka ee ka howlaga magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Maamulka gobola Banaadir oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka uu dhageestay cabashada kasoo yeertay gaadiidleyda goboka Banaadir, waxa uuna tilmaamay in la joojiyay in gaadiidka qaab qasab ah Ceymis loo galiyo.
”Waxaan rabaa in aan halkan ku cadeeyo in maamulka gobolka uu tix galiyay cabashada gaadiidleyda, waxaana gabi ahaan la joojiyay lacagihii ceymiska qasabka ahaa ee lagu so rogay gaadiidleyda gobolka” Ayuu yiri Afhayeenka gobolka.
Gaadiidka dadweynaha ee BL-ka ayaa shalay shaqo joojin sameeyay, waxa ayna ka cabanayeen ceymis qaab qasab ah loo galinayo gaadiidkooda, waxa ayna taasi keentay in gaadiid la’aan shalay ka dhacdo magaalada Muqdiso.
Wasaarada Gaadiidka Xukuumada Soomaaliya iyo Shirkad Ceymis oo kutaala magaalada Muqdisho ayaa ku heshiiyay in gaadiidka Muqdisho gaar ahaan kuwa dadweynaha qaab qasab ah loo galiyo ceymis lagana qaado lacago bishii.